2 အဘို့ရလဒ် nexo knights
Shoot goblins with your arrows as you buy stronger and better replacements on each new arena level.
အစွန်းရောက် position နဲ့ဆက်ဆံ
ဒီဆိုင်ကယ်ရှေ့ဟာအလွန်အစွန်းရောက်စိန်ခေါ်မှုရှိပါတယ်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာသင်မှတ်ပေးတော်မူမည်သောဒင်္ဂါးပြားရဖို့အရှိန်အဟုန်မြှင်။ သို့သော်အမှားလုပ်များနှင့်မြေပြင်ပေါ်တွင်ပျက်ကျခဲ့တက်အဆုံးသတ်ဖို့သတိထားပါဖြစ်လိမ့်မည်။ အသင့်ဖြစ်ပြီလား?
အကြီးအကျယ်လက်နက်ကိုင်အတားအဆီးများနှင့်သတ္တဝါများနှင့်ပြည့်စုံစင်္ကြံကတဆင့်ဒီရဲတိုက်အတွင်းမှလွတ်မြောက်ရန်။ သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့တုံ့ပြန်မှုဒီစိန်ခေါ်မှုအတွက်အလေ့အကျင့်ထဲသို့သွင်းထားလျက်ရှိသည်။ ကြောက်မက်ဘွယ်သောသတ္တဝါတွေတိုက်ခိုက်မှုဆန့်ကျင်သင့်အသက်တာ Fight နှင့်သိမ်းဆည်းပါ။